FREE-LANCE BULLDOG DOG MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Free-Lance Bulldog Dog Macluumaadka iyo Sawirada
Bulldog / Faransiis Bulldog Isku Darka Eeyaha
Soo jiido Bulldog-ka Free-Lance ee jira 2 sano jir— Wuxuu culeyskiisu yahay 55 rodol dhererkiisuna waa 3 fuudh iyo 16 inji dhererkiisa sare. Isagu waa Faransiis / Ingiriis Bulldog iyo eey aad ugu faraxsan kan ku raaxeysta socodkiisa. Aad iyo aad u kalgacal leh oo waliba jecel inuu ciyaaro. Wuxuu abuuraa xumaan badan haddii keligiis guriga lagu dhaafo sidaa darteed waxaan geyn doonaa xanaanada carruurta halkaas oo uu ku gubi karo xoogaa xoog dhisme ah. '
Ingiriisi bantam bulldog
Foxy Russell ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Ingiriis Bulldog iyo Bulldog Faransiis . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
ACA = Ururka Canine American Association Inc. = Lacag La'aan Bilaash ah
Naadiga Isku-dhafka Canine ee Mareykanka = Bulldog Bilaash ah
Diiwaan Geliyaha Nakhshadeeye = Bulshoog Lance Bilaash ah
Naadiga Naqshadeeyaha eeyaha Naaleeyaha = Lacag La'aanta
Diiwaan Geliyaha Cunnada Caalamiga ah®= Ingiriisi Bantam Bulldog (F1)
Hetti oo ah Bulldog madaxbanaan marka uu jiro 4 sano— 'Kani waa Henrietta ama' Hetti '. Iyadu waa 4 sano jir ah Free-lance Bulldog. Waxay jeceshahay inay seexato, ciyaarto, oo salaaxdo. Iyadu waa qof saaxiibtinimo badan, dad jecel iyo eeyo kale. '
Emmy iskoolka Bulldog iskood u shaqeysta 10 asbuuc iyo 6 rodol.
'Kani waa eeydayda Pounder. Iyadu waa 50% Bulldog Faransiis ah, 50% Ingiriis Bulldog. Iyadu waa madadaalo jecel oo waliba aad u xun. Waxay miisaankeedu yahay qiyaastii 55 rodol da'da 4.
Gertrude the Free-Lance Bulldog (French Bulldog / English Bulldog mix ey ey)
Soo jiido Bulldog-ka 'Free-Lance Bulldog' oo 2 sano jir ah, culeyskiisuna yahay 55 rodol, kuna sii jeeda doggie xanaano maalmeedka, oo ku habboon eeyaha ay milkiilayaashoodu shaqeeyaan!
Soo jiido Bulldog-ka 'Free-Lance Bulldog' oo 2 jir ah, miisaankiisuna yahay 55 rodol
'Macy, oo ah 50/50 Faransiis / Ingiriis Bulldog ah oo reer UK ah oo jira 18 bilood welina argagixiso!'
Macy, Bulldog Free-Lance (French Bulldog / English Bulldog mix ey) sida eey
sawirada eeyaha shiineyska ah
Macy, Bulldog-Free-Lance (French Bulldog / English Bulldog mix ey) sida eey yar oo dhalinyaro ah
Eeg tusaalooyin badan oo ah Bulldog-Free-Lance Bulldog
Free-Lance Bulldog Sawirada 1
Liistada eeyaha Bulldog-ga ee loo yaqaan 'French Bulldog Mix' eeyaha
chesapeake bay sarkaal muqisho isku darka shaybaarka
sawirada boqorka isbaanishka
cocker spaniel chihuahua isku darka buuxa koray
3/4 ingiriisiga bulldog 1/4 isku darka gorgorka
feedhka australia lo'da isku dhafka ah